Priti Patel: UK oo kor u qaaday taageerada gargaarka si loo badbaadiyo nolosha dadka ku nool waddamada Somalia & Itobiya – Balcad.com Teyteyleey
Priti Patel: UK oo kor u qaaday taageerada gargaarka si loo badbaadiyo nolosha dadka ku nool waddamada Somalia & Itobiya
Xoghayaha Horumarinta Caalamiga ah ee dalka UK Priti Patel, ayaa ku baaqday dadaal cusub oo dheeri ah oo wadajir ah si looga hortago in malaayiin qof ay u dhintaan gaaji iyo cudur.
Soomaaliya oo ah dal ay hareeyeen dagaallo sokeeye iyo xagjirnimo oo malaayiin qof ay ka carareen guryahooda, taageeradana maaha oo kaliya caawinta dadka si ay u noolaadaan, waxaa kaloo la siinayaa fursad ay ku doortaan noloshooda iyo mustaqbalkooda si aan loogu qasbin inay ku biiraan kuwa xagjirka mise ay galaan safarka halista ah ee dibadda.
Dowladda Itoobiya waxay muujisay hogaan adag abaartii 2016 waxayna la yimaadeen in ka badan 700 milyan oo doolar si ay u daboolaan baahida dadkooda. Waxaa ayna la shaqeynayaan dowladda si loo hubiyo in ay si waxtar leh uga jawaabaan sanadkan, si loo qorsheeyo isla markaana mudnaanta loo siiyo ayna kor u qaadaan maalgalintooda ay uga jawaabayaan abaarta.
“Dunidu waa inay nagu dayato isla markaana aan tallaabo qaadno si aan u cirib tirno dhibaatooyinka bani’aadamnimada oo halis galiya xasiloonida caalamka isla markaana aan dardar galino horumarka nabadda iyo ammaanka- taas oo dan u ah cid kasta”
Jawaab deg-degga ah ayaa ka timid UK horaantii sanadkan oo ku wajahan dhibaatada cunta yarida sii kordhaysa ee geeska Afrika, oo ay ku jiraan Soomaaliya oo loo balan qaaday £ 110 milyan, Itoobiya £ 11.5 milyan iyo £ 10 milyan oo ay ku deeqeen dadweynaha in la siiyo Guddiga Musiibooyinka ee Deg-degga ah taas oo keentay jawaab caalamiga ah. Taageeradan ayaa waxaa looga gol lahaa in looga hortago macluusha ka jirta Soomaaliya iyo Itoobiya, laakiin qatarta wali wey jirtaa.
Marwo Patel ayaa sidoo kale ku cadaadisay Saaxiibada Caalamiga ah, oo ay ku jiraan Baanka Adduunka in ay si deg deg ah u bixiyaan maalgelin badan. Baanka ayaa balan qaaday $1.8 Bilyan oo uu ku bixiyo meelaha dhibaatooyinka ay ka jiraan, oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo loo balan qaaday $50 milyan, Itoobiya $100 Milyan si ay u caawiyaan dadka ku nool goobaha ay abaartu saamaysay oo u baahan in laga caawiyo raashiin, biyo iyo adeeg caafimaad.
Soomaaliya xaaladaha daran ee abaarta waxaa ka mid ah daacuun, jadeeco dillaacday iyo dhimashada xoolaha iyo tirada sii kordhaysa ee dadka ka qaxay guryahooda iyo wadanka deriska ah ee Itoobiyaha oo qarka u saran macluul iyo malaayiin nolashooda halis soo wajahday.
Nus shacabka Soomaaliya ma heli karaan raashiin waxayna wajahayaan suuragalnimada in ay dhacdo abaartii saddexaad muddo 25 sano ah. £60 Milyan oo gargaarka UK waxay wax u tari doontaa:
• 350,000 qof oo cunto deg-deg ah
• Gabbaad oo ay helaan 100,000 oo qof
• Taageerada xoolaha oo loogu deeqay 500,000 oo qof.
The post Priti Patel: UK oo kor u qaaday taageerada gargaarka si loo badbaadiyo nolosha dadka ku nool waddamada Somalia & Itobiya appeared first on Ilwareed Online.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dil toogasho ah ku xukntay ragii ka dambeeyay dilka Wasiir Siraaji
Sheeko, shekel! : Gaso, ganuun, Gasiin Q. 46aaad Prof. Cali Jimcaale Axmed